Odeeffannoo namaa kaardiwwan daldalaatiif qabate. Teessowwan kaardii daldalaa cadncala Kaardiwwan Daldalaa irratti filatamaniiru.
Faayilii - Haaraa - Kaardii Daldalaa - Dhuunfaa caancalaa
Maqaa duraa 2
Maqaa duraa namichaa akka qunnamtii lammaffaatti fayyadamuu barbaadduu galchi.
Maqaa Dhumaa 2
Maqaa dhuma namichaa akka qunnamtii lammaffaatti fayyadamuu barbaadduu galchi.
Qubduraa namtichaa akka qunnamtii lammaffaatti fayyadamuu barbaabduu galchi.
Maqaa biyya keessa jiraattuu galchi.
Mataduree kaamayaa keetii galchi.
Lakkoofsa bilbilaa mana keetii galchi.
Lakkoofsa mobaayili kee galchi.
Teessoo intarneetii manataa saphaphuu galchi.
Title is: Dhuunfaa